Ikhambo Tips For Ukuhlola Italy ngu zemininingwane | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izeluleko Zokuhamba Ngezitimela > Ikhambo Tips For Ukuhlola Italy ngu zemininingwane
Isikhathi sokufunda: 3 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 11/12/2020)
Ukuhamba udlula Italy ngesitimela kuyinto Angisoze ngakukhohlwa engakufunda laphaya. inethiwekhi isitimela e-Italy uxhuma cishe wonke amadolobha amakhulu e-Italy, okwenza kube lula ukuze uthole bengonozulane. Uzihambela ngesitimela akuyona nje indlela esheshayo ngempumelelo ukubona Italy kodwa futhi inikeza kakhulu ukubukwa okumangalisayo emaphandleni yayo. Nazi ezimbalwa amathiphu travel lokuhlola Italy ngesitimela, ezokwenza isiqiniseko wena hambo eliyingqayizivele.
Ikhambo Tips For Ukuhlola Italy – Bhuka kusenesikhathi
Izihlalo nezinqola kuhlanzekile futhi ukhululekile kungakhathaliseki ukuthi sikhethe ukuhlala. Nokho, nini Ngokuthenga ithikithi lakho, Zama uku usheshe uyobhalisa ukuqinisekisa uthola esihlalweni ukuthi ikufanele wena.
Kuye uya khona esinalo ngamathiphu okuhamba ezahlukene ukuhlola Italy ngesitimela, ungabekwa abajikelezayo amahora ambalwa ngakho cabanga izidingo zakho. Ingabe uthanda ukuhlala nge window? achithe isikhathi esithile eziphumulele kanye nokubuka ukuphuma njengoba ubukela kwenkundla emangalisa bengidlula, noma ungathanda ukuba esihlalweni yezinto? lapho ungahambisa kusuka esihlalweni sakho ngokukhululekile ngaphezulu, kodwa namanje bayakwazisa ukubukwa kusukela namafasitela amakhulu gumbi.
Wasebenzise kahle amathuba ezingxoxo isikhathi sakho ugibelile
I isikhathi oyosichitha eside ugibele isitimela kungaba ithuba izihlele, uhambisane kwamanye ubuthongo noma ukwenza amalungiselelo uya khona eduze.
Akuvamile ukuthi ungakwazi ngempela ukucisha bese kuthathe isikhathi ngokwakho. Kungakhathaliseki ungathanda ukufunda incwadi, ukusebenza Italian yakho noma ufunde mayelana umlando futhi amasayithi oya kuyo oyikhethile, isinqumo ngesakho. Jabulela uhambo futhi ungakhohlwa unake ngefasitela ukuthatha e-Italy olunothile landscape.
Cologne ukuze Berlin Izitimela
Xoxa bendawo noma nezinye izihambi
Esinye sezipho ezinhle kakhulu amathiphu kule post blog, amathiphu ukuhlola Italy ngesitimela Izikhangibavakashi ukuthi empeleni ehamba ngesitimela ithuba elikhulu ukuhlangabezana bendawo noma abahambi nomqondo ofanayo. Kuyamangalisa ukuthi ungafundani kwabanye. Abantu bendawo angakutshela okungcono-amagugu afihliwe ukuvakasha, kuyilapho abanye abagibeli ungaba nakho kwabo kanye nezincomo. Ungase ahlale ngaphesheya kusuka buthule kodwa kumnandi futhi umuntu onobungane ngoba yonke ngesitimela, noma ungase aphule ice ngokubuza umbuzo. Zimiseleni ukwamukela ingxoxo, awazi ukuthi yini ungafunda noma ngubani ungase ubhekane endleleni.
Leipzig ukuze Dortmund Izitimela
Dortmund ukuze Stuttgart Izitimela
Landela etiquette isitimela – amathiphu travel lokuhlola Italy ngesitimela
Ukuhamba emhlabeni Italy ngesitimela kuyinto nakho amazing. Kubalulekile bahloniphe nabanye abagibeli esitimeleni ukuze uqinisekise wonke umuntu uhambo emnandi. Abasebenzi uyohlale ukuqinisekisa izivakashi oyinakekelile futhi unethezeke, Nokho, kukithi bonke esitimeleni ukwenza ngokucabangela.
Pompei eRoma Izitimela
Nakani kunomsindo e ukuthutha yakho bese uzama unamathele lokhu. Ukudlala umculo okhalela phezulu noma usebenzisa esihlalweni yonkana kuwe njengoba footrest akakaze baziswa. Nge yenhlonipho kokucabangela abanye, lokhu kuzokwenza uhambo isitimela wonke umuntu nohambo lwasolwandle ukuthi kujabulise kakhulu.
Ungathanda ukuzwa Italy ngesitimela bese usebenzisa amathiphu ethu travel lokuhlola Italy? Iya ku SaveATrain Online ukuze uhlole yonke okhethekile yethu fares bese uqale uhlela adventure wakho olandelayo!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftravel-tips-for-exploring-italy-by-train%2F - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
Uma ufuna ukuba abe nomusa kubasebenzisi bakho, ungakwazi ukuqondisa kwabo ngqo amakhasi ethu search. Kulesi isixhumanisi, uzothola imizila ethu adumile isitimela – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/nl_routes_sitemap.xml futhi ungakwazi ukushintsha / nl izilimi / noma / de nokuningi.
Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi amathiphu isitimela sokuvakasha travelitaly traveltips